सरी असल मान्छे, हामी बोल्न ढिलो भयो, तिमी रहेनौ ! - NepalDut NepalDut
सरी असल मान्छे, हामी बोल्न ढिलो भयो, तिमी रहेनौ !
बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा ३७ वर्षका २ पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भयो । पोखरा ६ लेकसाइडका संक्रमित पुरुषलाई बिहीबार बिहानमात्रै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्रको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो ।
यसअघि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल लेखनाथको आइसोलेसनमा रहेका उनमा कुनै दीर्घ रोग थिएन । २ दिनअघि नेपालदुतको सम्पर्कमा आएका उनले आइसोलेसनको अवस्था र खाना राम्रो नभएको जनाएका थिए ।
त्यहाँको अवस्था पुष्टि गर्न उनले फोटो र भिडियोसमेत हामीलाई पठाएका थिए । उनले आफूलाई हल्का ज्वरो आएको तर सास फेर्न समस्या नभएको उल्लेख गरेका थिए । सरसफाई, खाना र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आवाज उठाइदिन हामीसँग आग्रह गरेका थिए ।
कोरोनाको उपचारमा संलग्न डाक्टरको मनोबल कमजोर नहोस् भन्नेमा उनी पूर्ण सचेत थिए । उनले भनेका थिए, ‘यी समस्याबारे कुरा उठाइदिनोस् । तर डाक्टरहरुको मनोबल नघट्ने गरी । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो भरोसा उहाँहरु नै हो ।’
आइसोलेसनमा संक्रमितको अवस्था र अबको विकल्पबारे उनी केन्द्रीत समाचार तयार हुँदाहुँदै उनको निधन भयो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुने यी आठौं संक्रमित हुन् ।
‘यी समस्याबारे कुरा उठाइदिनोस् । तर डाक्टरहरुको मनोबल नघट्ने गरी । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो भरोसा उहाँहरु नै हो ।’
लेकसाइडमा ब्यबसाय चलाउने उनका श्रीमती र २ छोरा छन् । उनले आइसोलेसनमा दिनमा एक पटक पनि डाक्टर नआउने गरेको हामीलाई बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कमसेकम दिनमा एकचोटि आएर तपाईहरुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्ने हो । यहाँ त वेवारिसो जस्तो भयौं ।’
ज्वरो, अक्सिजन आफैंले नापेर नर्सलाई टिपाउने संक्रामक अस्पतालको चलन छ । त्यहाँ रहेका १० संक्रमितका लागि प्रेसर नाप्ने एउटा, अक्सिजन नाप्ने २ वटा र ज्वरो नाप्ने एउटा थर्मामिटर छन् । उनले लेखेका थिए, ‘शौचालयमा न साबुन छ, न सेनिटाइजर ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक भन्ने गरेका छन् रकम तल पठाइयो । तल पठाइएको रकम बीचमै चुहिएको त छैन ? हैन भने आइसोलसनको अवस्था किन यस्तो छ ?
सुरुमा उनी ज्वरो आएपछि अस्पतालमा स्वाब दिन आफैं गएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएपछि आफ्नै घरमा बस्न चाहेका उनलाई आइसोलेसनमा लगियो । बुधबार राति अचानक अक्सिजन लेबल कम भएपछि गण्डकी अस्पतलामा ल्याइएका उनी साँझ बिते । अरु रोग नभएका युवा आइसोलेसनको अवस्था सुधारको अपेक्षा गर्दागर्दै बिते । अरु संक्रमितको पनि यही नियति नहोस् ।
उनी आफ्नो सम्पर्कमा रहेका एक जनालाई कोरोना देखिएपछि आफैं जाँच गर्न गएका थिए । १५ गते कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएका उनमा सुरुमा कुनै लक्षण थिएन । कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन डा। वुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार उनको मृत्युको मुख्य कारण नै कोभिड–१९ नै हो । उनमा कडा खालको निमोनिया थियो ।
पश्चिमाञ्चल अस्पताल ल्याइपु¥याउँदा उनको अवस्था निकै नाजुक भइसकेको थियो । उनको अवस्था नाजुक होउन्जेलसम्म किन उपचारमा ध्यान दिइएन ? दिनमा एक पटक पनि डाक्टर वा नर्स नजाने आइसोलेसन उपचार केन्द्र हुन् कि मृत्युशाला ?
फेरि यस्ता समाचार र टिप्पणी लेख्नु नपरोस् । सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान जाओस् ।